1 – SRS Water Resources Development Office Bureau
Farsamo-yaqaanadda dayactirka ee wareega (Mobile Maintenance Teams)
Si kor loogu qaado adeegga ceelasha biyaha, loona yareeyo iney fadhiistaan (Non-functional) gaar ahaan degmooyinka iyo goobaha fog-fog, ayaa Xaf. Biyaha ee DDS wuxuu asaasay isaga oo kaashanaya bah-wadaagtiisa (UNICEF) kooxo farsamoyaqaano ah, oo aad loo qalabeeyey, aqoon sarena u leh dayactirka ceelasha.
Kooxdan oo team kasta uu wato gaadiid gaar ah, kana kooban 3 xirfadle ayaa ah kooxo bixiya adeeg aan kala go’ lahayn. Kooxahan ayaa wax badan ka taray yareynta ceelasha fadhiya ee deegaanka (rate of non-funtionality) ilaa hadda uu gaadho heerkii ugu hooseeyey intii dhowr sano ah oo lagu qiyaasay 9.5%.
Ka sakow shaqadda dayactirka, waxaa kale oo ay kooxahan kormeeraan, wacyigeliyaan kana soo warbixiyaan xaaladda ceelasha goobaha ay ka shaqeeyaan, taasna waxay fududeysay wadda shaqeynta iyo Xafiiska Biyaha iyo degmooyinka.
Kooxahan wareega (MMT), ayaa sanadkiiba ugu yaraan labo jeer la diyaariyaa (2-3 bilood ) gaar ahaan waqtiyadda roob yaraanta iyo abaaruhu jiraan. Intii lagu jiray kormeerka shaqo waxaa si fiican loo ogaaday ahmiyadda iyo doorka kooxahan wareega, shaqooyinkii ay qabteena la soo kormeeray, aadna loogu amaanay hawshooda, degmooyinkii la soo marayna ka marqaati kaceen waxtarkooda.